Development Software: Gịnị Bụ Nko? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
Development Software: Gịnị Bụ Nko?
Ejiri dị ka Ụkpụrụ Atụmatụ
Usoro Mmasị Ezizi Na-egwu
Oge na-egwu egwu
N'ime IAT Hooking
Anyị Kwesịrị Ịmara Banyere Ụdị Ụdị Nhọrọ.
Kedu ihe bụ nko?Na mmepe ngwanrọ, Ịme egwuregwu bụ echiche nke na-enye ohere ka agbanwe agbanwe omume nke usoro ihe omume. Usoro nke nwere ike ime ka ị gbanwee akpa àgwà nke ihe na-agbanweghị koodu gị nke kpara njiko. Emechara nke a site na idegharị usoro nko.
Ụdị ojiji a na-enye aka dị ukwuu site na ịtinye ọrụ ọhụrụ na ngwa, yana agbakwunye agbatị n'etiti usoro ọzọ na ozi nke usoro. Ejiri na-eme ka a kwụsị usoro mkpochapụ site n'ịgbasa ibu ọrụ na usoro ahụ kwesịrị ịrụ maka ozi ọ bụla. A ghaghị ịme ya naanị mgbe achọrọ ma wepụ ya na ohere mbụ.
Hụ na ị na-eji usoro nlekọta ndị ahịa (CMS) site n'aka onye na-abụghị onye ọzọ na ịchọrọ ịchọrọ nnukwu onye nlekọta site na email n'oge ọ bụla a kesara ọkwa ọzọ nakwa na omume a abụghị ihe ndabara nke ngwaọrụ ahụ. A ga-enwe usoro ụzọ di na nwunye:
Gbanwee koodu CMS abụghị isi echiche, mgbe niile n'ime ume ọhụrụ nke ngwaọrụ ị ga-ebute nsogbu nke ịmalite mgbanwe gị maọbụ na ị gaghị enwe ike ịnọgide na-eme ka ihe niile dị ọhụrụ;
Mee ka CMS gị bụrụ ihe ọzọ dị egwu, echere ihe niile, ị nweghị ike zuru ezu ma ọ bụ ihe onwunwe iji mee ihe ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna na-echekwa ihe ị ga-emepụta;
Nyochaa ugwo itinye nko n'ọrụ, ya bụ, lelee ma CMS ọ na-ele anya na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ modul maka ihe dị iche iche nke aha a ga-egbu na njedebe oge, n'ihi ọnọdụ a, nkesa nke ọhụrụ posts.
Akuku ala nke nko eji eji eme ihe na-agbanwe n'ozuzu site na ngwaọrụ iji ngwa. Ụkpụrụ dị mma nke nko abụghị ịgbanwe koodu mbụ. Na ihe omuma akwukwo di omimi nke ihe omuma ihe nile na eme ka mantra megharia onwe ya agbanweghi etiti. N'agbanyegh i ime ka ndi mmadu nwee ike ime ka obi sie gi ike, onye obula nke na-abia imechi ya agaghi eche echiche banyere mgbanwe a, onye ahu nke na-adighi ekwu banyere ya bu gi, obughi ngwa.
Mgbatị ahụ bụ ụzọ ọzọ a ga-esi ele ụzọ ntinye anya na-eme ka ngwa ahụ dịkwuo mma. Nzuzi nyocha nwere ike ịme ihe dị mma na omume nke ohere dịgasị iche nke nwere ike ịpụta site na ngwa ngwa nke ngwa maka otu ọnọdụ.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ na-enye ngwanrọ Developement Training na Gurgaon, Delhi NCR na India.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ na ọtụtụ (ihe niile) e depụtara na-egosiputa usoro iheomume maka hooks. Ha na-ekwu maka otu esi egbu usoro usoro nsogbu. Ụfọdụ na-adabere na ịchịkwa mmepe: Nzube, Ụlọ ọrụ, Nrụpụta Ihe, Iwu, Nkọwapụta, Onye Nyocha, Prototype, State, na Strategy.
Ndị ọzọ n'ime ihe atụ abụọ nke ịdị n'otu na nkebi nkebi: Ụzọ Ụkpụrụ na Bridge.
A na-ejikọta ihe ọmụmụ Semantics na ụdị aha nko (dịka ọmụmaatụ, na Iwu ahụ, a na-akpọ atụmatụ a ime ()).
Nkwalite Software - Gini bu usoro ntanu - 1Virtual a na - ebute n'uzo di iche iche site na ntughari di iche iche, ma ebe obu na a ghaghi igbanwe usoro ozo di iche iche, onye na - achikota adighi ama adreesị nke ike a puru iche mgbe i na - akpọ ya na koodu gi. Onye nchịkọta ihe, ya mere, na-akọwa usoro Mwubere Mebere (VMT), nke na-enye ụzọ ịjụ ase na adreesị ikike n'oge oge. A na-arụ ọrụ ọ bụla ejirila rụọ ọrụ na oge ojiri gaa na VMT. The VMT nke ajụjụ nwere ihe niile gbalitere usoro maka ya precursors, na Ọzọkwa ndị ọ na-ekwusa. Ya mere, usoro ndi ozo di iche iche na ejiri ihe nchekwa karia atumatu mmewere, n'agbanyeghi na ha na agba ọsọ.
Ebe ọ bụ na VMT bụ okpokoro nke nwere ederede na adreesị ebe nchekwa maka ikike ntanetị, ihe a ga-eme bụ iji dochie adreesị ncheta mbụ na adreesị nke ọrụ nko ziri ezi. Tinyere usoro ndị a, a ga-edegharị usoro a kpọrọ, a ga-egbukwa omume ọhụrụ a na-achọsi ike nke ikike ahụ.
Nkwalite Software - Gini bụ Nko - Point 2The Ịme usoro API n'eziokwu na-enye gị ohere iji meziwanye ihe nke usoro ọrụ. Site n'ikike inweta ebubo dị otú ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ọkwa ha site n'ịgbanwe ọrụ a ga-arụ na mbụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ichepụta ihe dị iche iche, wepụ ngwa ngwa na-agba ọsọ, ma rịọ ka onye ahịa kwenye na ọ ga-edebe archive na gburugburu, na cetera.
N'ezie, mkpebi kachasị oke na mkpebi dị na mpaghara nchekwa, dịka ọmụmaatụ, antivirus na antispyware. Mee nke a, enwere ọnọdụ n'ọnọdụ mmepe nkịtị anyị ebe Egwuregwu API nwere ike ịbụ isi ụzọ.
Igwe onyonyo mmemme Ịme ihe, n'ọnọdụ anyị kpọmkwem, pụtara ịnweta API site na os, ma ọ bụ site na DLL ọ bụla, ma gbanwee ya na ebe ọzọ, na-agbakwunyekwuo, na ikike ọzọ. E nwere ihe abụọ dị mkpa:
EAT na IAT: ihe niile EXE / DLL nwere API maka mbubata na tebụl nri. Tebụl ndị a nwere akara na-egosi API Entry Point. Site na-agbanwe akwụkwọ ndị a, na-eme ka ha na-egosi nlọghachi anyị, anyị nwere nko. Mee nke a, ma ọ bụrụ na EXE / DLL anaghị ebubata API, atụmatụ a agaghị arụ ọrụ;
Nkọwa ederede ziri ezi: Dịka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na ọ dị iche iche iji gbakwunye oku na oku anyị na mmalite nke koodu API, anyị nwere ike "nko ya", na-eme ka ikike anyị nwee ike ịga ebe ọ bụla a kpọrọ API. Dị ka ọ nwere ike, enwere nsogbu: ma ọ bụrụ na a gbasịrị koodu anyị, ọ dị anyị mkpa ịkpọ API mbụ, anyị ga-adaghachi na nlọghachi anyị, a ga-enwekwa ide mmiri. Otu ndokwa na-edozi nko ahụ inwe ike ịkpọ API, na-agbalịgharị ya ozugbo e gburu ya. Buru na dika o nwere ike, na etiti a n'etiti etiti, enwere ike ikpo oku API ole na ole ma ghara imezu oku ayi;
Ntinye ntinye bụ isi ebe anyị na-enweta nduzi bụ isi nke ike, anyị na-erekwa maka Jump, Push ma ọ bụ Oku maka ike anyị.
Ederede gụrụ: Windows ọrụ usoro ọzọ underpins hooking API. Anyị kwesịrị ịma otú Windows API nkwụnye ọrụ?
Nkwalite Software - Gini nyocha ntanu - Point 3As nke nkocha ihe ndi ozo na omume nke ihe di iche iche nke nwere ike iputa site na ngwa ngwa nke ngwa maka otu ihe na eme mgbanwe nke njikwa. Enweghi ihe ndi oru ndi ozo na-eme ka ha gbanwee nhazi ihe. Na njedebe nke ụbọchị, mgbe ihe omume mere, onye nchịkọta ahụ na-emegharị usoro ntinye akara na ihe ndị e debanyere aha na-eme oge ụfọdụ iji kwadebe ihe omume. Ugboro oge: ozi windo, ọbịbịa si na ọdụ ụgbọ mmiri.
Development Software - Kedu ihe ntanye - Point 4Each usoro na Windows nwere tebụl nke a na - akpọ Adị Mpempe Bubata (IAT), nke na - echekwa ihu na njirimara nke DLL nke usoro ọ bụla zitere. A na - eji nwayọọ nwayọọ na tebulu a na adreesị nke ihe DLL na oge ọsọ.
Site n'iji mgbakọ pụrụ iche, anyị nwere ike ime ka table IAT dị mma, bụrụ nke a pụrụ ichepụta iji gbanwee adreesị ya site na adreesị nke ikike omenala, na-egosiputa tebụl dịka a gụrụ-ozugbo mgbe mgbanwe a gasịrị. Na mgbe mgbe usoro ahụ gbalịrị ịkpọ ikike, ana enweta adres ya na tebụl IAT, a na-alọghachikwa pointer. Dika a gbanwere okpokoro IAT, enwere ike ime omenala nke ike mbu na koodu etinye n'ime usoro a.
Nkwalite Software - Gini bu nko - Point 5Netfilter bu ihe di iche iche nke Linux di iche karia 2.4. Ọ na-ahụ maka iche iche iche, NAT, firewall, redirection, n'etiti ndị ọzọ. Netfilter bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụtacha, ya edechaa ya. Ọ na - eme ka ọ bụrụ na ọ na - eme ihe na Kernel koodu, na - eme ka iji ya eme ihe n'ụzọ zuru oke ma na - anabata ya. Ihe ndị a na-ahapụ ihe ole na ole a pụrụ ichepụta ma nwee ike jupụta dị ka ihe na-eme maka oge ụfọdụ.
Development Software - Gịnị bụ nko - njedebeỤzọ usoro mmemme na-arụ ọrụ ma mepee ọtụtụ ihe ndị a pụrụ ichepụta maka ndị injinia ngwanrọ, Otú o sina dị, a ghaghị iji ya rụọ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na ha na - agụnye ihe ndị a ma ama na iyi nke usoro ma gbanwee nke mbụ omume nke Os, ngwa ma ọ bụ ngalaba software ndị ọzọ, na-eme ka o sie ike ịghọta ihe kpatara software. Na nke ọzọ, dị ka akọwapụtara tupu oge a n'isiokwu a, itinye usoro nke usoro ndị a na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ime ka ọ ghara ịda mbà.
Nkọwa nke CRM maka 2017 | Ọzụzụ CRM
15 kacha ugwo Asambodo na 2017